Jowhar.com - Somali news Leader - News: Axmed Madoobe oo markii ugu horeysay ka degay magaalada Galkacyo
December 12 2013 12:26:13
Axmed Madoobe oo markii ugu horeysay ka degay magaalada Galkacyo
Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) wafdi uu hoggaaminayo ayaa ka degay magaalada Galkacyo, waxaana wafdiga garoonka diyaaradaha Galkacyo ku soo dhoweeyay madax ka tirsan Maamulka Puntland ee Gobolka Mudug.
Booqashada wafdiga uu hoggaaminayo Axmed Madoobe ayaa la sheegayaa inay la xariirto sidii uu uga qeyb geli lahaa aaska boqorka King Kong iyo sidii uu u booqan lahaa dhaawacyada la geeyay Galkacyo.
Axmed Madoobe ayaa uga sii gudbaya Galkacyo magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland, halkaas oo uu kulamo kala duwan kula qaadanayo madaxda maamulka Puntland.
Wararka ayaa sheegaya in Axmed Madoobe uu weydiisan doono maamulka Puntland taageero maaliyadeed iyo mid ciidan, iyadoo Puntland ay xilligan taageero weyn u heyso Maamulka lagu muransan yahay ee Jubaland.
Axmed Madoobe ayaa taageero ka raadinayay dalalka Itoobiya iyo Kenya oo geed fadhi u ah maamulka Kismaayo, waxaana booqashadiisa Puntland ku soo aadeysa, iyadoo horay Maamulka Puntland u cadeeyay taageerada uu u haayo Mr Madoobe.
master on July 06 2013
jowhar.com3,176,437 unique visits